Amaxabiso kunye notshintsho lwelayisensi kwinto eNtsha kwi-AutoCAD 2014 -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ixabiso kunye neeLayisenisi kwiinguqu ezintsha ze-AutoCAD 2014
Inguqulelo ka-2014 ye-AutoCAD sele ihanjisiwe, ineempawu zayo ezibalulekileyo. Ngokwesiko, kwiveki ezayo siza kwenza uphononongo lokuba olu tshintsho luthetha ntoni. Nangona kunjalo, okokuqala sifuna ukugxila kwimiba ethile eyandulelayo ukumiliselwa kwale nguqulo, esisiseko yoyilo lweshishini kunye nemodeli yelayisensi esekwe kwiiSuites ezikhethekileyo. Ekugqibeleni siquka uluhlu lwamanani ngokwe-intanethi yakho; kucacisa ukuba ababandakanyi i-VAT.
Ukuhlaziywa komfanekiso wobumbano ebenawo i-AutoDesk, eza nethoni entsha kumnyama wendabuko obubalasele kule minyaka idlulileyo, kusinike ukuthetha ngeeforamu zabasebenzisi. Utshintsho luye lwenziwa ngokuthe ngcembe kwiinkonzo ezahlukeneyo kunye neqonga lemveliso, ethi yona ize ngexesha apho ukukhangela kwizixhobo eziselfowuni kwakuphantse kunganyamezeleki. Indlela yabo icacile, uyilo loyilo apho i-niche ebabekile ibisazi kunye neemveliso ezigqitha kulwakhiwo lwezixhobo ze-cinema kunye nemidlalo ye-elektroniki.
I-AutoDesk yenza ukuhlanganiswa kwezicelo kwizinto ezibizwa ngokuba yiStits, ukwenzela ukuba abasebenzisi banakho iinkqubo ezahlukeneyo phantsi koqhelwaniso lobuchule.
Kuze kube ngoku, izicelo eziphambili ziye:
AutoCAD LT I-AutoCAD Imephu ye3D
Nangona zizonke, iinkqubo ezahlukeneyo zizungeze i-100, eziye zahlulwa kwizinto ezilandelayo ze-7 eziLungelelweyo kwi-Standard, Premium ne-Ultimate models.
Kuyabonakala ukuba kwiinqanaba ezininzi kwi-Standard level, i-AutoCAD ifakiwe, i-Raster Design evumela ukuba iguqule i-raster ukuya kwiVector (okokuqala ibizwa ngokuthi i-Overlay) kwaye ngoku ibeka iReCap eninzi yokulungiselela ukuphathwa kakuhle kwamafu. Kwinqanaba leNkulumbuso, i-3ds Max Design iqukwa rhoqo kwaye ekugqibeleni ixhomekeke kwi-specialty kodwa ngokubanzi kwi-NavisWork ejoliswe kwintlanganiso yokusebenzisana yezinto kwiindawo ezidibeneyo zentathu.
Ngokubanzi, sifumana imodeli inomdla, nangona sisazi ukuba ukusasazeka kweemveliso ezi-AutoDesk kuye kwayinyanzela ukuba yenze njalo, yiyo loo nto ibeka iintlobo zee-combos ekuziqhelaniseni ukuba zineemveliso eziphinda-phinda imisebenzi emininzi. Isizathu kukuba njengoko bezithengiwe iimveliso kwaye benabathengi abasele bekho, bekungekho lula ukudibanisa iimveliso kwaye kuye kwafuneka ukuba zigcinwe ziphila-oko ndicinga ukuba kufuneka kube nzima-.
Suite Iintetho Ixabiso (ngaphandle kweVAT)
Oku kujoliswe kubayilayi, abakhi bezobunjineli kunye neenjineli zokudweba, i-raster ukuya kutshintsho lweedoksi yedatha, uyilo lwezakhiwo kunye ne-3D.
Kubandakanya enye Uhlobo oluqhelekileyo kunye neenkqubo:
La Inkokhelo yeNkulumbuso inlcluye 3ds Max Design ukudala imifanekiso ye-cinematic kunye neemimiselo eziphambili.
kunye Ultimate version I-Alias ​​Design ukusebenzela imizekelo eyinkimbinkimbi.
Ukwakha I-Suite Suite
Esi sifo senzelwe abakhi bee-electromechanical engineers (MEP), oonjiniyela abanokwakha kunye neekontrakta zokwakha ezifuna umsebenzi ophantsi kwe-BIM modeling.
La Uhlobo oluqhelekileyo ukuzisa iinkqubo:
-AutoCAD Inkcazelo yeZakhiwo
La Inkokhelo yeNkulumbuso I-3 inezela ezinye izicelo: 3ds Max Design, I-NavisWork Qondanisa kwaye uyibuyise
Kwaye Ultimate version kuquka i-4 kunye: NavisWork Phatha, Inventor, uRobotural Robot kunye ne-InfraWorks
I-Infrastructure Design Suite
Iinjineli zobunjongo ezilungiselelwe, abaqulunqi benkonzo karhulumente, abaqeqeshi be-GIS
La nguqulelo oluqhelekileyo ukuzisa iinkqubo:
La Inkokhelo yeNkulumbuso Iinkqubo ezininzi ze-8: 3ds Max Design, Ukwakhiwa kweNkcazo, ukuCandwa kweeNkonzo, i-3D yabasebenzi, i-InfraWorks kunye neBritor, i-Rail layout kunye nee-modules ze-Geotechnical.
La Ultimate version izibalo ezininzi ze-4: NavisWorks Phatha, IRobot Structural, Revit kunye neNdlela / iindlela zeNdlela kunye noMlambo / umkhukula.
I-Designory Design Suite
Oku kubaklami bezityalo zokuvelisa
-Izixhobo eziKhethekileyo zoKwakha
La Inkokhelo yeNkulumbuso Iinkqubo ezininzi ze-3: 3ds Max uyilo, kunye ne-NavisWork Xelisa.
La Ultimate version izibalo ezininzi ze-2: I-Inventor Professional kunye NavisWorks Phatha.
Ukuqhelaniswa nabaqulunqi bokucwangcisa izityalo, iinjineli zokucwangcisa izityalo eziya kulawula kuphela ukuyila kodwa ukusebenza.
-P kunye nesazisi
La Inkokhelo yeNkulumbuso Iinkqubo ezininzi ze-5: 3ds Max Uhlobo lwe-3D, Ulwakhiwo, uLawulo oluCwangcisiweyo kunye ne-NavisWork.
La Ultimate version I-2 idibanisa ezinye izicelo: Inventor Professional kunye ne-Inventor kuquka neeNkqubo eziHlangeneyo.
Okujoliswe kubakhi beemveliso, oonjiniyela benjini, oonjiniyela bamandla ugxile kwiinkqubo kunye nokuveliswa nokuphuhliswa kweemeko.
La Inkokhelo yeNkulumbuso Iinkqubo ezininzi ze-4: 3ds Max Inventor Professional, Electrical and NavisWork Ukulinganisa.
La Ultimate version izibalo ezininzi ze-2: i-Alias ​​Design kunye NavisWork Phatha.
Oku kubhekiselele kubenzi beefayile, abaxhasi kunye nabavelisi ababonakalayo okanye abavelisi bezemidlalo.
Iingqungquthela kunye neenguqu zokugqibela ziphantse zifana. I-Standard ayifaki i-Softimage.
Ixabiso libonakala lihlula phakathi kwe-Entertaiment Suite equka kuphela i-3ds Max kunye nomnye oquka iMaya.
An uhlobo umdla AutoCAD 2014 kukuba nayiphi na inkqubo efumaneka Uvavanywa, ngaphandle kokuba ukubhalisa uchukumise ukuba baye ivenkile online lula yababini ekhawulezayo ngentetho, inkqubo yokusebenza yaye ukuba kuyimfuneko ukuthumela iphakheji kuphela ngeposi okanye download.
Kwaye ngamanani (ngaphandle kwe-VAT), kwisicelo ngasinye, lolu uluhlu; qaphela ukuba akubona wonke umntu sele sele ene 2014 version:
I-AutoCAD ye-Architect 2014
I-AutoCAD Imephu 3D 2014
I-Autodesk 3ds Max 2013
I-Autodesk 3ds Max Design 2013
I-Autodesk Alias ​​Design 2014
I-Autodesk HSMWorks 2012
I-Autodesk Infrastructure Modeler 2013
I-Autodesk Inventor LT 2013
I-Autodesk Mudbox 2013
I-Autodesk Navisworks Lawula i-2014
I-Autodesk Navisworks Xelisa i-2014
I-Autodesk Revit Architecture 2013
I-Autodesk Revit LT 2013
I-Autodesk Revit LT Suite 2013
I-Autodesk Revit MEP 2013
I-Autodesk Revit Structure 2013
I-Autodesk Scaleform Mobile SDK
I-Autodesk Scaleform Unity Plug-in
I-Autodesk Showcase 2013
I-Autodesk Smoke 2013
I-Autodesk Softimage 2013
I-Autodesk plug-in tsElements
I-Autodesk T-Splines-plugin ye-Rhino
Uyilo lojongano lweemveliso ze-AutoDesk luhlala luzinzile emva kotshintsho oludibeneyo ukusuka kuhlobo 2009; Ke ngoko, olu tshintsho sele lukhankanyiwe emfanekisweni alunampembelelo kwinkangeleko yomdibaniso ovela kwitoni engwevu-mnyama efakwe ukusukela nge-AutoCAD 2009. Kwaye ngokuhambelana kwepotifoliyo ngohlobo lweeSuites, ixesha liya kuxela utshintsho olufunekayo. Inguqulelo ka-2015 ngokuqinisekileyo iya kubandakanya i-retrofits esekwe kwiimveliso ezibonisa abasebenzisi ngaphakathi kwe-Standard Suites.
Olunye ulwazi kwi: